Umnatha wocingo oGalisiweyo onehexagonal
Sikunqwenelela wena kunye nosapho lwakho Merry Christams. Ndiyathemba ukuba nonke nibe neholide emnandi! Nantsi i-hexagonal mesh yethu yocingo enokuthi ihombise ikhaya lakho.Yenze ikhaya lakho libe lihle kunye nefashoni. Umnatha wocingo onehexagonal ukwabizwa ngokuba yi chicken wire mesh.Isetyenziswa kakhulu kubomi bethu bemihla ngemihla.Y...
Ngaba uyazi ukuba yintoni i-field fence?I-field fence ekwabizwa ngokuba yi-cattle fence.Iveliswa ngeengcingo zentsimbi eziditshiwe ezitshisiweyo.Ucingo lwasendle lolunye ucingo olusebenzayo, olunoqoqosho olukhusela izilwanyana zasendle.Ucingo lwasendle lunokusetyenziswa njengomqobo ecaleni kwendlela. ukukhusela izilwanyana...
Ucingo lwenkukhu luza kwiigeyiji ezahlukeneyo. Iiguages ​​bubunzima bocingo hayi ubukhulu bomngxuma. Okukhona igeyiji iphezulu, kokukhona ucingo luya kuncipha. Umzekelo, Unokubona i-19 yocingo lwegeyiji, olucingo lunokuba malunga ne-1mm ubukhulu. Kungenjalo unokubona i22 yocingo lweGauge, enokuba appr...
Ucingo lwenkukhu luneegeyiji ezahlukeneyo. I-Guage ithetha ubukhulu bocingo hayi ubukhulu bomngxuma. Okukhona usezantsi igeyiji, kokukhona ucingo lujiyile. Umzekelo, i-19 geji yocingo, ucingo lunokuba malunga ne-1mm ubukhulu. Kungenjalo unokubona i22 yocingo lweGauge, olunokuba malunga ne-0.7mm ubukhulu...
Sasikumboniso weBatimat ukubonisa umnatha wethu wocingo olunehexagonal, umnatha wocingo oludityanisiweyo, umnatha wocingo we-chian, ucingo lwegadi, isango legadi kubo bonke abahlobo kwihlabathi liphela. Iimveliso zethu zazidume kakhulu kulo mboniso.
Umahluko phakathi komnatha omncinci wocingo olunehexagonal kunye nehexagonal wire mesh enzima?
Umnatha onzima we-hexagonal wenziwa ngocingo lwentsimbi okanye ucingo lwensimbi olufakwe ngeplastiki. I-mesh ine-hexagonal, kwaye i-wire diameter ingaphezulu kwe-2.0 mm nangaphantsi kwe-4.0 mm. Iyalukwa kwaye iveliswe ngumatshini onzima othe nkqo wegabion. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ukugcinwa kwamanzi. Iprojekthi ibekwe ...
Ngaba uyazi ukuba singawusebenzisa njani umnatha wocingo onamacala amathandathu?
Umnatha wocingo onamacala amathandathu unokusetyenziswa njenge mesh yeenkukhu nemivundla, eyenziwe ngocingo lwentsimbi olunekhabhoni encinci, olunolwakhiwo oluqinileyo lwemesh kunye nomphezulu ogudileyo. Isetyenziswa ngokubanzi kushishino kunye nokwakhiwa kwezolimo njengokuqiniswa kunye nokutshisa. Ikwasetyenziswa njengocingo kwiikheji zeenkukhu, fi...
Ngaba uyalazi ixesha lenkonzo yokubiyela intsimi?
Ngenxa yocingo oludityanisiweyo lwehinge lusetyenziswa kwindawo efumileyo, umhlwa kunye nomhlwa ngokuqinisekileyo kuya kwenzeka. Inokusetyenziswa ixesha elingakanani ngokubanzi? Izinto zokwenza ucingo lwasendle kunye nocingo lweenkomo lunocingo olunezinki zombane, ucingo olushushu lwegalvanized, ucingo olucwecwe lweGalfan lwentsimbi, i-10% ye-aluminiyam zinc al...
Ukusetyenziswa kwePaneli ye-Welded Wire Mesh
ngu admin on 21-03-25
Ngokubanzi, zisetyenziswa kakhulu kushishino kunye nezolimo kuba zinenzuzo eqhelekileyo yokumelana nokugqwala okuqinileyo, i-asidi elungileyo kunye nokumelana ne-alkali kunye nobomi obude. Ukongeza, ucingo lokhuseleko, iintyatyambo kunye nocingo lwezityalo zenziwe ngemibala eyahlukeneyo yePVC yomgubo etshizwe kumphezulu ...
ngu admin on 20-11-18
Umnatha wocingo olunehexagonal ngomnye womnatha wocingo onomngxuma omacala mathandathu. Olu hlobo lomnatha wocingo olunamacala amathandathu lulukwa ngocingo lwentsimbi, ucingo olusezantsi lwekhabhoni yentsimbi okanye ucingo lwentsimbi engenakutyiwa. kunye ne-pvc coated.Ukuba ukhetha i-di eshushu...
Umnatha wocingo oludityanisiweyo ludityaniswe ngocingo lwentsimbi, ucingo lwentsimbi yekhabhoni. Umngxuma womnatha usisikweri.Unyango lwangaphezulu lunokwenziwa ngombane, lufakwe igalvanized eshushu, lufakwe i-pvc lugqunywe.Eyona nto ichasene nomhlwa yi pvc edityaniswe net. Umnatha wocingo oludityanisiweyo, unokwahlulwa ube ngumnatha wocingo oludityanisiweyo ...
Umboniso ubaluleke kakhulu kwinkampani yethu.Siya kumboniso phantse minyaka le.Nanku omnye wemiboniso esiyijoyineyo. Sikwi-Batimat ngo-4 ~ 8, Nov, 2019 BATIMAT, umboniso woyilo lweminyaka emibini eParis, eFransi, uququzelelwe yiReed Exhibitions Group, ebambe ngempumelelo i-30 ...